အလယ်အလတ် Orbitofrontal Cortex Grey Matter ကို Abstinent Substance မှီခိုသူများ (၂၀၀၉) တွင်လျှော့ချသည် - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
Medial Orbitofrontal Cortex gray matter Abstinent ပစ္စည်းမှီခိုပုဂ္ဂိုလ်များ (2009) ခုနှစ်တွင်လျှော့ချသည်
Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ ဇန်နဝါရီ 15, 2009; 65 (2): 160-164 ။
အွန်လိုင်းစက်တင်ဘာ 18, 2008 ထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2008.07.030
FULL ဆန်းစစ်ချက်: Medial Orbitofrontal Cortex gray matter Abstinent ပစ္စည်းမှီခိုပုဂ္ဂိုလ်များခုနှစ်တွင်လျှော့ချသည်
ဂျိုဒီ Tanabe,1,2 ဂျေဆန် R. Tregellas,2 Laetitia Thompson က,2 Manish Dalwani,2 အဲလစ်ဇဘက် Owen,1 သောမတ်စ် Crowley,2 နှင့် မာရီ Banich2,3
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု
စွဲလမ်း၏မူးယစ်ဆေးမှနာတာရှည်ထိတွေ့ orbitofrontal cortex (OFC) တွင်ဆယ်လူလာ adapter နဲ့အလွဲသုံးစားမှု-related အပြုအမူအခြေခံစေခြင်းငှါဆက်စပ် limbic-prefrontal လမ်းကြောင်းဖြစ်ပေါ်သည်။ သိသိသာသာအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကြားမှအန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်များစေရန်တစ်ဦး propensity ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုတစ်ဦးချင်းစီ (SDI) တွင် medial OFC ကမောက်ကမဖြစ်မှုကကမကထပြုခဲ့နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ medial OFC မီးခိုးရောင်ကိစ္စ (GM က) အသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ SDI အတွက်အနိမ့်ပါလိမ့်မယ်သောအယူအဆစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
SDI ကိုးနှင့်ထိန်းချုပ်မှု 20 ပါဝင်ခဲ့။ SDI သည်ဓာတုပစ္စည်း ၂ ခုသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောများသောအားဖြင့်ကိုကင်း၊ အမ်ဖီတမင်းနှင့်အရက်သောက်ခြင်း၏ပျမ်းမျှကြာချိန် ၄.၇၊ ၂.၄ နှင့် ၃.၂ နှစ်တို့အပေါ်မှီခိုသည်။ အရည်အသွေးမြင့် T2 အလေးချိန်ရှိသောပုံများကို 4.7T MR စနစ်တွင်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ပုံပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းများကို SPM2.4 တွင်အကောင်အထည်ဖော်သော voxel-based morphometry (VBM) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒေသဆိုင်ရာ GM အသံအတိုးအကျယ်အတွက်ကွာခြားချက်များ covariance မော်ဒယ်တစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ GM နှင့်အသက်အရွယ်များအတွက်ပူးတွဲကွဲပြားသုံးပြီးစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ စာရင်းအင်းမြေပုံများကို p <.3.2 ဟုသတ်မှတ်ပြီးနှိုင်းယှဉ်မှုများအတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ အလယ်အလတ် OFC GM အသံအတိုးအကျယ်ဟာပြုပြင်ထားသောလောင်းကစားလုပ်ငန်းတွင်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆက်နွယ်နေသည်။
SDI အတွက်အထူးနှစ်နိုင်ငံ medial OFC အတွက်အနိမ့် GM ကအသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါရှိခဲ့သည်။ သေးငယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သိသိသာသာ medial OFC GM ကများအကြားဆက်စပ်မှုနှင့်ပြုပြင်ထားသောလောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်မြင့်မားသောအန္တရာယ်ကုန်းပတ်ကစားဇွဲရှိခဲ့သည်။
ဤသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာနေကြပြီး SDI အတွက်မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်မြေတပြင်လုံးသည်ဦးနှောက်ဆုံးမခြင်းနှင့်အတူ VBM သုံးစွဲဖို့ပထမဦးဆုံးစက္ကူဖြစ်ပါတယ်။ လျှော့ချ medial OFC GM ကပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုအတွက်အောင်ရောဂါဗေဒဆုံးဖြတ်ချက်အခြေခံအကျိုးကို-သင်ယူခြင်း circuit ကိုအတွင်းရေရှည်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။
ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုပုံမှန်မဟုတ်သောရည်မှန်းချက်ညွှန်ကြားအပြုအမူအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်နှင့် (ဆုလာဘ်အပြုအမူဖြန်ဖြေဟာ cortico-striatal-limbic ဆားကစ်တစ်ခုရောဂါဗေဒလုအဖြစ် conceptualized ထားပြီး1,2,3,4) ။ အထပ်ထပ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ် prefrontal cortex အတွက်ရေရှည်ဆယ်လူလာအပြောင်းအလဲများကိုအလုပ်မဖြစ်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူများနှင့်ဇာတ်စင်စွဲအဆုံးသတ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းချို့ယွင်းဆုံးဖြတ်ချက်များပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ထင်နေကြသည်။
Neuroimaging လေ့လာမှုများ (functional ဖြစ်စေ၏သက်သေသာဓကများကို5,6,7,8) နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုအတွက် orbitofrontal cortex (OFC) တွင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမူမမှန်။ လျူ et al ။ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ Poly-ပစ္စည်းဥစ္စာချိုးဖောက်သေးငယ် prefrontal, ဒါပေမယ့်ယာယီမဟုတ် cortex တွေ့ရှိခဲ့ (9) ။ voxel အခြေစိုက် morphometry (VBM) ကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများ (ကိုကင်းစွဲထဲမှာလျှော့ချ medial OFC, anterior cingulate နှင့်နောက်ကျနေခဲ့သည်မီးခိုးရောင်ကိစ္စတွေ့ပြီ10) နှင့် opiate စွဲအတွက် prefrontal နှင့်ယာယီမီးခိုးရောင်ကိစ္စ (11) ။ စိတ်ကြွဆေးစွဲခြင်းနှင့် HIV ပိုးကူးစက်လေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့စိတ်ကြွဆေး lentiform မီးခိုးရောင်ကိစ္စ volume ထဲမှာတစ်ခုတိုးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ပေမယ့်ဦးနှောက်ကိုအသံအတိုးအကျယ်ပေါ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးကူးစက်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများဆန့်ကျင်ခြင်းဖြင့်ရှုပ်ထွေး။ ဒီလေ့လာမှုတွေ၏တစ်ဦးကန့်အသတ် MR စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့၏အချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ recency ဖြစ်ခဲ့သည်။ အရက်များအတွက်ပြသခဲ့ပြီးအဖြစ်အာရုံကြောအလွှာအပေါ်က) ​​အချို့မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ Reversible လုပ်ဖြစ်မည်အကြောင်းကြောင့်ဤ (အရေးကြီးပါတယ်12,13,14) နှင့်ခ) စူးရှသောမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများမှာပါဝင်နေတဲ့အာရုံကြောအလွှာဖွယ်ရှိသောသူတို့အားအခြေခံအဆုံး-ဇာတ်စင်စွဲကှာခွား (2) ။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှုအချိန်ကြာမြင့်စွာနေကြပြီးပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုတစ်ဦးချင်းစီ (SDI) တွင်မီးခိုးရောင်ကိစ္စဆုံးရှုံးမှု၏ပုံစံကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရှာ၏။
ဒီလေ့လာမှုအတွက်အသုံးပြုအဆိုပါဒေတာကိုကျနော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ (စဉ်အတွင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ SDI အတွက် prefrontal ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုလျှော့ချသိရသည်သောလေ့လာမှုတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်စုဆောင်းခံခဲ့ရ15) ။ အဆိုပါလုပ်ငန်းတာဝန် (ventral medial prefrontal cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူလူနာအတွက်အောင်ချို့ယွင်းဆုံးဖြတ်ချက်စမ်းသပ်ဖို့အစပိုင်းတွင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးစစ်မှန်သောဘဝဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏မသေချာမရေရာနဲ့ဆုလာဘ်တက်ကြွလာသည်သောအချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်အိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကို (IGT) ခဲ့16) ။ medial OFC မီးခိုးရောင်ကိစ္စ၏အသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ abstinent SDI အတွက်အနိမ့်လျှင်ကျနော်တို့ဆုံးဖြတ်နေဖြင့်ဤနေရာတွင်သူတို့အားရလဒ်များကိုတိုးချဲ့
(20 yrs ဟောင်း 14 အမျိုးသမီးတွေ / 6men, 33 SD) 11 ထိန်းချုပ်မှုနှင့် 19 ပစ္စည်းဥစ္စာ-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီ (SDI) တို့အပါအဝင်သုံးဆယ်ကိုးဘာသာရပ်များ, (9 အမျိုးသမီးတွေ / 10 ယောက်ျား, 35 yrs ဟောင်း7SD က) ဒီလေ့လာမှုမှာပါဝင်ခဲ့။ SDI ဆေးပညာစွဲသုတေသနနှင့်ကုသရေးဌာန (အနုပညာ), ရေရှည်လူနေအိမ်ကုသမှုဝန်ဆောင်မှုတက္ကသိုလ်ကော်လိုရာဒို၏ School မှစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ Inclusion စံ DSM-IV စံသုံးပြီးတဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတရားမဝင်တ္ထုများအပေါ်မှီခိုပါဝင်သည်။ ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်ပါဝင်စံပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မှီခိုမရှိရောဂါရှိကြ၏။ အားလုံးပါဝင်သူများအဘို့ဖယ်စံ, ကြိုတင်သိသိသာသာခေါင်းကိုစိတ်ဒဏ်ရာ, အပြုသဘော HIV ပိုးအခြေအနေ, ဆီးချို, အသည်းရောင်, C, သို့မဟုတ်အခြားအဓိကဆေးဘက်ဆိုင်ရာနာမကျန်းနှင့် 80 ထက်လျော့နည်းအိုင်ကျူအာရုံကြောနာမကျန်း, schizophrenia သို့မဟုတ်စိတ်ကြွရောဂါပါဝင်သည်။ အားလုံးသင်တန်းသားများကိုကော်လိုရာဒိုအကွိမျမြားစှာ Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ကအတည်ပြုစာဖြင့်ရေးသားအသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ပေးခဲ့သည်။
SDI များတွင်မူးယစ်ဆေးမှီခိုအဆိုပါကွန်ပျူတာ Composite အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Diagnostic အင်တာဗျူး (CIDI) Module (SAM ကို) (CIDI-SAM ကို) (အလွဲသုံးစားပြုမှု -Substance သုံးပြီးတိုင်းတာခဲ့သည်17) ။ CIDI-SAM ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားဘို့ဒီဇိုင်းကိုစနစ်တကျအင်တာဗျူးဖြစ်ပါသည်, အင်တာဗျူးကို တင်. , (ကောင်းသောစမ်းသပ်မှု-retest နှင့်အချင်းချင်းအဆင့်သတ်မှတ်သူယုံကြည်စိတ်ချရရှိသည်ဖို့ပြသထားသည်18) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုမူးယစ်အဘို့, နောက်ဆုံးအသုံးပြုမှုလက္ခဏာရေတွက်နှင့်ရက်စွဲမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ CIDI-SAM ကိုထိန်းချုပ်မှုမှမပေးခံခဲ့ရသည်။ ပြုပြင်ထားသောလောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ် performance အချက်အလက်များကို 34 ဘာသာရပ်များ၏ (15 ထိန်းချုပ်မှု, 19 SDI) 39 များအတွက်ရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ (တစ်ဦး fMRI စမ်းသပ်မှုများအတွက်အဆင်ပြေအောင်ဟာအိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကို (IGT) ၏ပြုပြင်မွမ်းမံရာတွင်အသုံးပြု16) ။ task ကိုအသေးစိတ်ယခင်က (ဖော်ပြထားပါပြီ15) ။ ဘာသာရပ် "Play သို့မဟုတ် Pass ကို" ကို ရွေးချယ်. နှင့်ဤအစောပိုင်းနှောင်းပိုင်း, 80 အချိန်လုပ်ကွက်သို့ခွဲခြားခဲ့ပြီးသောအဘို့အ2စမ်းသပ်မှုတွေရှိခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းအနှောင်းပိုင်းစမ်းသပ်မှုတွေနှိုင်းယှဉ်အစောပိုင်းပေါ်တွင် "မကောင်းတဲ့" ကုန်းပတ်ကစားရန်ရွေးချယ်ကြိမ်အရေအတွက်စုစုပေါင်းမှာခဲ့သည်။ covariates အဖြစ်အိုင်ကျူ, ပညာရေးနှင့်အသက်အရွယ်သုံးပြီးကှဲလှဲ၏ထပ်ခါတစ်လဲလဲအစီအမံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (rmANOVA) အချိန်အပြန်အလှန်အားဖြင့်အုပ်စုတစ်စု၏သက်ရောက်မှုများအတွက် SPSS ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
အိုင်ကျူဝေါဟာရနှင့် Matrix ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင် subtests အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်ရသောထောက်လှမ်းရေး၏ Two-subtest Wechsler အတိုကောက်စကေး၏အခြေခံပေါ်မှာတိုင်းတာခဲ့သည်။
Imaging က MR
ပုံရိပ်တွေဟာ standard quadrature ခေါင်းကိုကွိုင်သုံးပြီး 3.0T တကိုယ်လုံး MR ကင်နာအပေါ် (General Electric, Milwaukee, WI) ဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။ TR = 3, TE = 1, အက်ဖ်အေ = 45, 20: တစ်ဦးက high resolution ကတော့ 45D T256 မာန်တင်း SPGR-မှာ IR sequence ကိုအောက်ပါ parameters များကိုအသုံးပြုခဲ့2 matrix, 240 မီလီမီတာ2 FOV (.9 × .9 မီလီမီတာ2 In-လေယာဉ်), 1.7 မီလီမီတာအချပ်အထူ, Coronal လေယာဉ်။ Scan ကိုအချိန်9'' 24 "ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးက neuroradiologist (JT), ရွေ့လျားမှုရှေးဟောင်းပစ္စည်းများနှင့်စုစုပေါင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမူမမှန်များအတွက် EPI T2 * ပုံရိပ်တွေများအတွက်အထူးသဖြင့် encephalomalacia ခန္ဓာဗေဒပုံရိပ်တွေအကဲဖြတ်။ အဘယ်သူမျှမလေ့လာမှုများဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။
image processing နှင့်စာရင်းဇယား
image processing အတွက် Voxel-based morphometry Toolbox (VBM5.1) (ကို အသုံးပြု. ကောက်ယူခဲ့သည်http://dbm.neuro.uni-jena.de/vbm/) Matlab5အပေါ် running SPM7.5 အကောင်အထည်ဖော်။ SPM5 အတွက် VBM (ကစုစည်းမော်ဒယ်သို့တစ်ရှူး segment, ဘက်လိုက်မှု correction နှင့် Spatial ပုံမှန်ပေါင်းစပ်19) ။ hidden Markov ကျပန်း Fields တစ်ရှူး segment (အလတ်စား HMRF 0.3) ၏တိကျမှန်ကန်မှုတိုးတက်လာဖို့လျှောက်ထားခဲ့ကြသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်က default parameters များကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ဦးနှောက်ဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်းအဘို့အအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Consortium (တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးပျံ) ကထောက်ပံ့ပေးတစ်ရှူးဖြစ်နိုင်ခြေပြမြေပုံများမှပုံမှန်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးက 12 မီလီမီတာ FWHM Gaussian kernel ကို 14 × 15 × 14 မီလီမီတာတစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းတင်ပါသည်အတွက်ရလဒ်3။ ဒုတိယအဆင့်တွင် ဦး နှောက်အချက်အလက်တစ်ခုလုံးသည် covariance (ANCOVA) ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အုပ်စုများအနှံ့ပုံစံပြုပြီးစုစုပေါင်း GM ပမာဏနှင့်သက်တမ်းကို covariates အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ GM အသံအတိုးအကျယ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ပတ်သက်။ အခြခွင့်ပြုပါရန်စုစုပေါင်း GM အသံပမာဏ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖယ်ရှားခဲ့သည်။ .1 တစ်ခုပကတိတံခါးခုံမျက်နှာဖုံးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ စာရင်းအင်းမြေပုံများကို p <.05 ၏စပျစ်သီးပြွတ်အဆင့်အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသည်။ မိသားစုပညာရှိအမှား (FWE) ကို သုံး၍ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းများနှင့် p <.005 ၏ voxel-level threshold အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ စပျစ်သီးပြွတ်အဆင့်စာရင်းအင်းများ၏တရားဝင်မှုကိုသေချာစေရန်အတွက်မဟုတ်သော isotropic ချောမွေ့မှုကိုပြုပြင်ခဲ့သည် (20).
အကျိုးစီးပွား Medial OFC ဒေသ (Roi)
မြေတပြင်လုံးသည်ဦးနှောက်ကိုအတည်ပြုခွင့်နှင့်လက်ဝဲ medial OFC တစ်ဦးရွယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (Marsbar SPM Toolbox အတွင်းအလိုအလျောက်ခန္ဓာဗေဒတံဆိပ်ကပ်ခြင်း (AAL) ရွယ်စာကြည့်တိုက်ကို အသုံးပြု. အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့လေ့လာဆန်းစစ်21,22).
GM ကအသံအတိုးအကျယ် OFC (-5, 53, -5, MNI) medial မှဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီသောအုပ်စုတစ်စုခြားနားချက်မော်ဒယ်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ maxima မှသက်ဆိုင်ရာပု voxel မှရရှိသောခဲ့သည် (ပုံ 1) ။ GM ပမာဏနှင့် IQ၊ ပညာရေးနှင့်စုစုပေါင်း GM အတွက်ညှိထားသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအကြားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်မှုသည် p <.05, 1-tailed တွင်ဖြစ်သည်။ အယူအဆတစ်ခုအနေဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသော GM သည်မကောင်းသောကဒ်များကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၁- အမြီးစမ်းသပ်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အရောင်မြေပုံနှင့်ဖန်ခွက် ဦး နှောက်သည် OFC တွင်မီးခိုးရောင်ကိစ္စတိုးလာခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုသူတစ် ဦး ချင်း (SDI) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစုစုပေါင်း GM နှင့်အသက် (Co-level, threshold p <.05, cluster-level) ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ ...
GM ကအသံအတိုးအကျယ်နှင့် CIDI လက္ခဏာ count ကများအကြားဆက်စပ်မှု
တစ်ခုချင်းစီကိုမူးယစ်အဘို့, CIDI-SAM ကို (11 မှီခိုနှင့်7အလွဲသုံးစားမှုလက္ခဏာတွေထဲကနေ4စုစုပေါင်း) တစ်ဦးလက္ခဏာ count ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့။ လက္ခဏာအကြားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်မှုရေတွက်ခြင်းနှင့် medial OFCGM အသံအတိုးအကျယ်စုစုပေါင်း GM က, အိုင်ကျူ, နှင့်အသက်အရွယ်အဘို့အချိန်ညှိ, ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
အသက်အရွယ်နှင့်စုစုပေါင်း GM နဲ့မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်ဆုံးမပဲ့ပြင်၏ covariates နှင့်အတူတစ်ဦးက2×2(ကျား, မ, အုပ်စု) ANOVA GM ကအသံအတိုးအကျယ်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအပြုအမူအပေါ်အုပ်စုတစ်စုအပြန်အလှန်အားဖြင့်ကျားမနှင့်ကျား, မတစ်ဦးအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အကဲဖြတ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
ယင်းအုပ်စုများအကြားအသက်အရွယ်သို့မဟုတ်ကျားမမကွာခြားချက်ရှိခဲ့သည်။ ယင်းအုပ်စုများအကြားပညာရေးနှင့်အိုင်ကျူအတွက်ကွဲပြားမှုရှိခဲ့သည်။ အိုင်ကျူနှင့်ပညာရေး (p = .03) ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ စားပွဲတင် 1 မှီခိုသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုများအတွက် SDI အစည်းအဝေးကိုသတ်မှတ်ချက်များ၏အရေအတွက်ကိုပြသထားတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောမူးယစ်ဆေးဖြတ်ပြီးနှင့်အတွင်း abstinence ၏ကြာချိန်အတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအပြောင်းအလဲရှိခဲ့သည်။ ကိုကင်း, အရက်နှင့်စိတ်ကြွဆေးထံမှပျမ်းမျှ abstinence အသီးသီး 4.7, 3.2 နှင့် 2.4 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
SDI နှင့်ထိန်းချုပ်မှုနမူနာများအတွက်လူ ဦး ရေအချိုးအစားနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခို variable တွေကို။ မှီခိုမှု = မှီခိုမှုအတွက် DSM-IV စံသတ်မှတ်ချက်အရဘာသာရပ်အရေအတွက်၊ အလွဲသုံးစားမှု = အလွဲသုံးစားမှုအတွက် DSM-IV စံသတ်မှတ်ချက်အရဘာသာရပ်အရေအတွက်။ ±± SD (အကွာအဝေး) ကိုဆိုလိုသည်။ * p <.005 ။ ...
ပုံ 1 ANCOVA ကို အသုံးပြု၍ ဦး နှောက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတစ်ခုမှအရောင်ထပ်ခြင်းနှင့်ဖန်ထည်တို့၏ ဦး နှောက်ဖြစ်သည်။ SDI နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကထိန်းချုပ်မှုတွင်နှစ်နိုင်ငံ medial OFC တွင် GM ပိုမိုသိသာထင်ရှားစွာရှိသည်။ အထင်ရှားဆုံးခြားနားချက်မှာညာဘက် medial OFC ([-5, 53, -3], p <.004, corrected) ဖြစ်သည်။ IQ ကို covariate အဖြစ်ထည့်ခြင်းသည်ရလဒ်များကိုမပြောင်းလဲပါ။ IQ နှင့်ပညာရေးသည်သိသိသာသာဆက်နွယ်မှုရှိသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် covariates နှစ်ခုလုံးနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုထပ်မံမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။
SDI အတွက်တိုးမြှင့် GM ကမရှိသိသာဒေသများမျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အတူတူတပြင်လုံးကိုဦးနှောက်စပျစ်သီးပြွတ်-Level ဆုံးမခြင်းကို အသုံးပြု. ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါရှိခဲ့သည်။
အလယ်အလတ်ဘယ်ဖက်နှင့် orbitofrontal ဒေသများသည်အလယ်အလတ် ဦး နှောက်ဆန်းစစ်ခြင်းများမှရလဒ်များကိုအတည်ပြုသည် (control> SDI, Frontal_Med_Orb_Left, t = 3.59, p = .001, Frontal_Med_Orb_Right, t = 2.9, p = .006) ။
မကောင်းတဲ့ကုန်းပတ်၏ရွေးချယ်မှုပေါ်တွင်အချိန်သို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စု၏အဘယ်သူမျှမအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။ (controls အချိန်ကျော် SDI ထက် သာ. ကြီးမြတ်အတိုင်းအတာအထိဆိုးရွားကုန်းပတ်ရှောင်ရှားရန်တော်မှာသို့သော်ဤအပြန်အလှန်သိသိသာသာမဟုတ်ခဲ့ပုံ 2) (က F = .88, p = .3) ။
SDI နှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကစား "မကောင်းတဲ့" ကဒ်များခန့်မှန်းခြေမဖြစ်စလောက်ယုတ်, ပညာရေး, အိုင်ကျူ, နှင့်အသက်အရွယ်အဘို့အချိန်ညှိ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှထိန်းချုပ်မှု SDI ထက်နည်းပါးလာ "မကောင်းတဲ့" ကတ်များကစားပေမယ့်အချိန်အပြန်အလှန်အားဖြင့်အုပ်စုသိသိသာသာမဟုတ်ခဲ့ ...
ဆုံးဖြတ်ချက်အကြားဆက်စပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အောင်နှင့် OFC မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ် medial
(။ - 39, p = .01,1-အမြီး, r =) မကောင်းတဲ့ကုန်းပတ်၏ OFC GM ကအသံအတိုးအကျယ်နှင့်ရှောင်ရှားခြင်း medial အကြားတစ်ဦးကသေးငယ်သိသာထင်ရှားသောနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုအုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အသက်အရွယ်, ပညာရေးနှင့်အိုင်ကျူများအတွက်ချိန်ညှိပြီးနောက်ဆက်စပ်မှု (- 35, p = .03, 1-အမြီး။ r =) သိသာထင်ရှားသောနျြရစျ။ SDI (။ , r = - 37) ထက် - အဆက်စပ်မှုထိန်းချုပ်မှု (22 ။ r =) တွင်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့ပေမယ်ကြောင့်သေးငယ်တဲ့ဂဏန်းမှ (အုပ်စုတစုအတွင်းသိသိသာသာမဟုတ်ခဲ့ပုံ 3).
စုစုပေါင်း GM ကများနှင့်အသက်အရွယ်အဘို့အချိန်ညှိ (-5, 53, -3 မှာ) medial OFC မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်၏ Scatterplot, နှင့် "မကောင်းတဲ့" ကတ်များကစားခြင်းအတွက်ဇွဲ။ (။ - 39, အိုင်ကျူနှင့်ပညာရေးအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိဘဲ p = .01, r =) (r = - ။ 35, တစ်ဦးကသိသာထင်ရှားသောနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် ...
SDI များထဲတွင် (11 မှီခိုနှင့်7အလွဲသုံးစားမှုလက္ခဏာတွေထဲကနေ4စုစုပေါင်း) medial OFC GM ကအသံအတိုးအကျယ်နှင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုလက္ခဏာ count ကအကြားမျှဆက်စပ်မှုရှိ၏။
OFC အတွက် GM ကအသံအတိုးအကျယ်ပေါ်အုပ်စုတစ်စုအပြန်အလှန်အားဖြင့်ကျားမသို့မဟုတ်ကျားမမရှိသိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ကျား, မမကွာခြားချက်ရှိခဲ့သည်။
ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုတစ်ဦးချင်းစီ (SDI) တွင်လျှော့ medial Orbital တိုကျရိုကျ cortex (OFC) မီးခိုးရောင်ကိစ္စ (GM က) ၏တွေ့ရှိချက်ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ပါတယ်။ Franklin et al ။ voxel-based morphometry (VBM) နည်းလမ်းများ ( အသုံးပြု. ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကင်းမှီခိုဘာသာရပ်များအတွက်အနိမ့် GM ကအစီရင်ခံရန်ပထမဦးဆုံးခဲ့ကြ10) ။ သူတို့ဟာ ventral medial OFC အတွက်အနိမ့် GM ကသိပ်သည်းဆ, anterior cingulate နှင့် anterior insula လေ့လာသည်။ Lyoo et al ။ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ opiate မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက်နှစ်နိုင်ငံ medial OFC အတွက်အနိမ့် GM က (ရှာတွေ့11) ။ ဒီထက် GM ကလည်းသာလွန်ခြင်းနှင့်အလယ်တန်းတိုကျရိုကျမှာတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး anterior ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေနှစ်ခုစလုံးအတွက်ဘာသာရပ်များနှင့်နီးစပ်သူသို့မဟုတ် MR စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့၏အချိန်မှာမူးယစ်ဆေးသုံးပြီးခဲ့ကြသည်။ Franklin et al အတွက်။ , ကိုကင်းကြိုတင်ပုံရိပ်မှနောက်ဆုံးအသုံးပြုခဲ့သည်ကာလ၏ပျှမ်းမျှအရေအတွက်က 15 ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယစက္ကူများတွင် opiate-မှီခိုပုဂ္ဂိုလ်များ methadone ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှုတစ်ခုအလားအလာအရေးကြီးတဲ့ခြားနားချက်ကတော့အတော်လေးအချိန်ကြာမြင့်စွာ abstinence ဖြစ်ပါတယ်။ SDI abstinence ၏ဤဆောင်များတွင်အခြားဆေးဝါးများစိတ်ကြွဆေးနှင့်ကြာကြာများအတွက် 2.4 နှစ်ပေါင်းပျမ်းမျှ။ ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးပြောင်းပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကောင်းစွာအရက်များအတွက်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက်ပမာဏ၏ recovery အရက်သမားအတွက် MRI နည်းလမ်းများနှင့်အတူအကဲဖြတ်အဖြစ် (ကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းတိုင်းတာနိုင်ပြီးဣန္ဒြေစောင့်ခြင်းပြီးနောက်လပေါင်းများစွာကြာရှည်စေခြင်းငှါ13,23,12) ။ ထိုသို့သောပြန်လည်နာလန်ထူ (relapse အားဖြင့်နှောင့်နှေးစေခြင်းငှါပုံပေါ်13,14,23) ။ နောက်ပြန်လှည်တစ်ရှူးဆုံးရှုံးမှုအလားတူလေ့လာမှုများတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပြီမဟုတ်နေစဉ်, စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်ပေ neuroimaging လေ့လာမှုများ (အချိန်ကြာမြင့်စွာ abstinence နှင့်အတူနောက်ကြောင်းပြန်ကြောင်း dopamine Transporter ရရှိနိုင်မှုအတွက်လျှော့ချရေးကိုပြသ24) ။ ရပ်နားခြင်းနှင့် relapse နှင့်ဆက်စပ်သည်ဤယာယီပြောင်းလဲမှုများကိုရေရှည်အဖြစ်ရေတိုရေရှည်အပြောင်းအလဲများလေ့လာနေ၏အရေးပါမှုကို underscore ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူဦးရေအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာ abstinence medial OFC အတွက်အတော်လေးတိကျတဲ့အပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်အကောင့်များနှင့် medial OFC အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုအမြဲတည်သောပိုမိုမြဲထင်ဟပ်သောဖြစ်နိုင်ခြေအကြံပြုနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ orbitofrontal cortex SDI ကြားတွင်ဆင်းရဲသားကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ဦးဆောင်မျှော်မှန်းရလဒ်များ (အကဲဖြတ်ရန်တစ်ခုချို့ယွင်းစွမ်းရည်များအတွက်အလားအလာအာရုံကြောအလွှာအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည်8,2,4) ကို limbic စနစ်ဖြင့်ယင်း၏ဆက်သွယ်မှုယေရှုသည်, OFC မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များတစ်ကိုယ်စားပြုမှုထုတ်လုပ်ရန်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေါင်းစပ်။ ထိုကဲ့သို့သောဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း (အဖြစ်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များနှောင့်အယှက်မှထင်ကြသည်အာရုံကြော shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်ဆဲလ်အချက်ပြ in adapter တစ်ခုအတွက်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရလာဒ်များ8) ။ ထိုကဲ့သို့သောမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန် (သင်ယူခြင်းအဖြစ် OFC-မှီခိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွက်ကင်းပြပွဲလိုငွေပြမှုနဲ့ကုသကြွက်များ4) ။ နာတာရှည်ကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်, ဇီဝဖြစ်စဉ်မူမမှန် (တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးဖို့အတော်လေးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိပါတယ်7) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအပြောင်းအလဲတချို့ယာယီရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေ (မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ပြီးနောက်ရှည်လျားဆက်လက်ရှိစေခြင်းငှါ2,25,26)
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် ventral medial OFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူလူနာအတွက်အိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကို (IGT) ရက်နေ့တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုငွေပြမှုဖေါ်ပြခြင်းအပြုအမူလေ့လာမှုများ (နှင့်ကိုက်ညီများမှာ16) ။ ventral medial တိုကျရိုကျကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူလူနာကဲ့သို့ပင် SDI (ထို IGT အပေါ်အာရုံချို့ယွင်းလျက်ရှိသည်27,28,29,30), အချို့ယွင်းလျော့နည်းပြင်းထန်သော်လည်း (30,28,31) ။ ဤသည်ထိန်းချုပ်မှုကိုပိုမို SDI ထက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ "မကောင်းတဲ့" ကုန်းပတ်ရှောင်ရှားပေမယ့်ကွဲပြားမှုသိသိသာသာမဟုတ်ကြကြောင်းအကြံပြုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီသည်။ မကောင်းတဲ့ကတ်များကိုရှောင်ကြဉ်ရန် medial OFC GM ကအသံအတိုးအကျယ်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တို့အကြားအဆိုပါအနှုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်မှုမျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များအကဲဖြတ်အတွက် OFC တစ်အခန်းကဏ္ဍနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အဆိုပါဆက်စပ်မှုအဓိကအားဖြင့်ထိန်းချုပ်မှုမဟုတ်ဘဲ SDI မောင်းနှင်သလိုပဲ။ ကျနော်တို့နောက်ပိုင်းတွင်ထိုသို့သောဆကျဆံရေးနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ခြင်းဟာ OFC GM ကတွေ့ရှိချက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်အကြံပြုနိုင်ကြောင်းအဖြစ် OFC GM က, abstinence ဆက်နွယ်နေကြောင်းရှိမရှိဆန်းစစ်။ သို့သော် abstinence နှင့် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အကြားအဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တစ်ဦးဆက်ဆံရေးမရှိခြင်း, မူးယစ်ဆေးမှီခို၏ပြင်းထန်မှုအပါအဝင်အခြားအချက်များ၏နံပါတ်အဖြစ်တ္ထုများအရေအတွက်သို့မဟုတ် type ကိုတစ်ဦး Pre-နေကြလို့ပဲလိုငွေပြမှုဆိုလိုပါဘူး, နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အချက်များတွေ့ရှိချက်အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦး Pre-နေကြလို့ပဲအခြေအနေ Post-မူးယစ်ဆေးအကျိုးသက်ရောက်မှု, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးပေါင်းစပ်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေအညီအမျှဖွယ်ရှိရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တို့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ SDI အတွက်သိသိသာသာတိုးမြှင့် GM က၏ဒေသများတွင်မတှေ့ခဲ့ပေ။ ရွယ်နည်းလမ်းများသုံးပြီးတစ်ခုမှာလေ့လာမှု striatum, accumbens နှင့် parietal cortex (ထဲမှာ GM ကတိုးရှာတွေ့32) ။ အခြားသူများက (ကိုကင်းချိုးဖောက် striatal volume ထဲမှာတိုးအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ33) နှင့်ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများသည်အတွက် thalamus နှင့် Pre-အလယ်ပိုင်း gyrus အတွက် (34) ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
VBM သုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုနှင့်ယခင်သူတွေကိုအကြားအဓိကအတိုင်းအတာများကွာခြားချက် segment ပေါင်းစပ်ပြီးသောစုစည်းမော်ဒယ်၏အသုံးပြုခြင်း, ဘက်လိုက်မှု correction နှင့်မှတ်ပုံတင် (ဖြစ်ပါတယ်19) ။ နောက်ထပ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခြားနားချက် (MR ပုံရိပ်တွေ 3T မှာယခင်လေ့လာမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤလေ့လာမှုမှာ 1.5T မှာဝယ်ယူခဲ့ကြကြောင်း10,11,35,14) ။ ဒီသိသိသာသာရလဒ်ကို impact မည်ဟုမျှော်လင့်မထားဘူးသော်လည်း, သူက parameters တွေကို optimized ကြသောအခါမီးခိုးရောင်ကိစ္စ-အဖြူကိစ္စဆနျ့ကငျြဘ-to-ဆူညံသံအချိုး (CNR) quantified ပြီလေ့လာမှုများ (3 T ကနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 1.5T မှာပိုမိုမြင့်မား CNR တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ရကျိုးနပ်သည်36,37) ။ ပိုမိုမြင့်မားသောမီးခိုးရောင်ကိစ္စ-အဖြူကိစ္စ CNR ဆူညံသံအချိုးမှပေးထားသော Spatial resolution နဲ့ signal ကို သာ. ကောင်း၏တစ်ရှူး segment နှင့်ပိုပြီးတိကျမှန်ကန် VBM ရလဒ်များကိုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရတော့မှာပါ။
ဒီလေ့လာမှုအများအပြားန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာနမူနာအရွယ်အစားဆင်တူလေ့လာမှုများ၏အကွာအဝေးအတွင်းပေမယ့်ကျိုးနွံ (ဎ = 39) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအချက်မှာဘာသာရပ်များဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်မူးယစ်ဆေး-တိကျတဲ့ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုအခြ precluding, မျိုးစုံတ္ထုများအပေါ်မှီခိုခဲ့ကြသည်။ တတိယအချက် abstinence Self-အစီရင်ခံစာအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်။ SDI (အစားထောင်ထဲမှာ၏) လွှဲပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တစ်ဦးထောင်ဒဏ်အောက်ပါတစ်ခုခုနှင့်အသိုင်းအဝိုင်းစမ်းဖို့လွှတ်ပေးရန်မှီ, ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုစနစ်ဖြင့်လူနေအိမ်ကုသရမန်ပေးခဲ့သည်။ သူတို့ကဒီလေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မတိုင်မီတစ်ဦးကနိမ့်ဆုံး2လအတွင်းကုသမှုလိုက်နာမှုလိုအပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အနုပညာမှာလွှဲသို့မဟုတ်အကျဉ်းထောင်ပေါင်း2လအတွင်းအတွက်အချိန်အတော်လေးကြာမြင့်စွာနေကြပြီးခဲ့သည်။ SDI အနီးကပ်ကြီးကြပ်ခဲ့ကြနှင့်မကြာခဏခံယူ, ဆီးမူးယစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုလေ့လာသည်။ Self-အစီရင်ခံစာစိတ်မချရဖြစ်နိုင်သည်နေစဉ်, ကစူးရှသောမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများရှိမြင့်မားမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ စတုတ္ထ, အပြုအမူများနှင့် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အကြားအုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ဆက်ဆံရေး၏တွေ့ရှိချက်များကိုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်သို့မဟုတ်ဓာတ်အကြောင်းကိုအပြီးအပြတ်ကောက်ဖြစ်ကြသည်။ စိတ်ကြွရောဂါ၏ရောဂါသီးခြားခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ကျနော်တို့အထူးသ (လျော့ချ OFC အသံအတိုးအကျယ်နှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ပြသထားပြီးဖြစ်သောအဓိကစိတ်ကျရောဂါများအတွက်မျက်နှာပြင်ဘူး38).
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ကျနော်တို့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ abstinent ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်နှစ်နိုင်ငံ medial OFC ကန့်သတ်ထား GM က volume ထဲမှာအားကောင်းတဲ့လျှော့ချတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလူဦးရေအတွက်အနိမ့် GM ကအသံအတိုးအကျယ်သတင်းပို့ပထမဦးဆုံးစက္ကူဖြစ်ပါသည် တိကျတဲ့ မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်ဘို့အလုံးဦးနှောက်ဆုံးမခြင်းကို အသုံးပြု. medial OFC ရန်။ abstinence ရွေ့ခံခဲ့ရကတည်းကလျှော့ချ medial OFC GM ကပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုအတွက်အပြုအမူအောင်အကျိုးကို-သင်ယူခြင်း circuit ကိုနောက်ခံရောဂါဗေဒဆုံးဖြတ်ချက်အတွင်းရေရှည်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။
ဤစာအုပျ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများနှင့်ဆက်စပ်ရောဂါများအပေါ် NIH / NIDA နှင့်သုတေသနတို့အတွက်အင်စတီကျုကနေ Grant ကနံပါတ် K08DA1505 အားဖြင့်စွဲ၏ Harvard Medical School ကတပ်မ (JT) နှင့် DA 009842 (MD, TC) ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတစ်ခုတည်းကိုသာစာရေးသူ၏တာဝန်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သေချာပေါက်အဆိုပါ NIH ၏တရားဝင်အမြင်များကိုကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိပါ။ ကျနော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုများအတွက်စွဲကုသမှုနှင့်သုတေသနဝန်ဆောင်မှုကနေကဲန် Gaipa နှင့်ဂျူလီ Miller ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ဖော်: အဆိုပါစာရေးဆရာမျှပြီးတော့ biomedical ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားအလားအလာပဋိပက္ခများကိုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
1 ။ Volkow ND လီ TK ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ: ကော်လံကလွဲနေတယ်သွားပြီအပြုအမူများ၏ neurobiology ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2004; 5: 963-970 ။ [PubMed]
2 ။ Kalivas PW, Volkow ND ။ စွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောအခြေခံ: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရောဂါဗေဒ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1403-1413 ။ [PubMed]
3 ။ Jentsch JD, တေလာ JR ။ ဆုလာဘ်-related လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အမူအကျင့်များထိန်းချုပ်ရေးအတွက်သက်ရောက်မှုတွေ: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် frontostriatal ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေရရှိလာတဲ့ Impulse ။ Psychopharmacology (Berl) 1999; 146: 373-390 ။ [PubMed]
4 ။ Schoenbaum, G, Roesch MR, Stalnaker က TA ။ Orbitofrontal cortex, ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2006; 29: 116-124 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
5 ။ Stapleton JM, မော်ဂန် MJ, Phillips က RL, Wong က DF, Yung ဘီစီ, Shaya ek, et al ။ polysubstance အလွဲသုံးစားမှုများတွင်နှောက်ဂလူးကို့စအသုံးချ။ Neuropsychopharmacology ။ 1995; 13: 21-31 ။ [PubMed]
6 ။ လန်ဒန် ED, Ernst M က, Grant က S နဲ့, Bonson K ကို Weinstein အေ Orbitofrontal cortex နှင့်လူ့မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု: အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်။ Cereb Cortex ။ 2000; 10: 334-342 ။ [PubMed]
7 ။ et al Volkow ND, Hitzemann R ကို, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Wolf ကအေပီ, Dewey SL ။ ကိုကင်းချိုးဖောက်ရေရှည်တိုကျရိုကျဦးနှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်အပြောင်းအလဲများကို။ synapses ။ 1992; 11: 184-190 ။ [PubMed]
8 ။ Volkow ND, မုဆိုး JS ။ စွဲလမ်း, မလှူခြင်းနှင့် drive ကိုတစ်ဦးရောဂါ: အ orbitofrontal cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Cereb Cortex ။ 2000; 10: 318-325 ။ [PubMed]
9 ။ လျူက X, Matochik ဂျာ Cadet JL, လန်ဒန် ED ။ polysubstance ချိုးဖောက် prefrontal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏သေးငယ်တဲ့ volume: တစ်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Neuropsychopharmacology ။ 1998; 18: 243-252 ။ [PubMed]
10 ။ Franklin TR, Acton PD, Maldjian ဂျာ Grey က JD, Croft JR, Dackis, CA, et al ။ မီးခိုးရောင်ကိစ္စဟာနောက်ကျနေခဲ့သည်, orbitofrontal အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှု, cingulate နှင့်ကိုကင်းလူနာယာယီ cortical လျော့နည်းသွားသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 51: 134-142 ။ [PubMed]
11 ။ Lyoo Ik, Pollack MH, ငွေရောင် MM, Ahn KH, Diaz CI, Hwang J ကို, et al ။ Prefrontal နှင့်ယာယီမီးခိုးရောင်ကိစ္စသိပ်သည်းဆ opiate မှီခိုအတွက်လျော့နည်းစေပါသည်။ Psychopharmacology (Berl) 2006; 184: 139-144 ။ [PubMed]
12 ။ Pfefferbaum တစ်ဦးက, Sullivan က EV, Rosenbloom MJ, Mathalon DH, Lim က KO ။ တစ်ဦး5နှစ်ကြားကာလကျော်အရက်လူ cortical မီးခိုးရောင်ကိစ္စနှင့် ventricular အပြောင်းအလဲများတစ်ဦးကထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998; 55: 905-912 ။ [PubMed]
13 ။ Gazdzinski S က, Durazzo TC, Meyerhoff DJ သမား။ အရက်မှီခိုရာမှပြန်လည်နာလန်ထူနေစဉ်အတွင်းမြေတပြင်လုံးသည်ဦးနှောက်တစ်သျှူးအသံအတိုးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုများယာယီဒိုင်းနမစ်နှင့်ပြဌာန်းခွင့်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2005; 78: 263-273 ။ [PubMed]
14 ။ Cardenas VA သို့, Studholme ကို C, Gazdzinski S က, Durazzo TC, Meyerhoff DJ သမား။ အရက်မှီခိုနှင့် abstinence အတွက်ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများပုံပျက်သော-based morphometry ။ Neuroimage ။ 2007; 34: 879-887 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
15 ။ Tanabe J ကို, Thompson က ll, Claus ED, Dalwani M က, ဟက် Ke, Banich အမ် Prefrontal cortex လှုပ်ရှားမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းလောင်းကစားဝိုင်းနှင့် Non-လောင်းကစားပစ္စည်းဥစ္စာချိုးဖောက်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။ လူ့ဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်း။ 2007; 28: 1276-1286 ။ [PubMed]
16 ။ Bechara တစ်ဦးက, Damasio AR, Damasio H ကို, Anderson က SW ။ လူ့ prefrontal cortex ပျက်စီးမှုအောက်ပါအနာဂတ်အကျိုးဆက်များမှအာရုံမခံစားနိုင်သော။ သိမှတ်ခံစားမှု။ 1994; 50: 7-15 ။ [PubMed]
17 ။ Cottler LB, Schuckit MA, Helzer je, Crowley T က, ဒါရိုက်တာ Woody, G, နေသန် P ကို, et al ။ အဓိကရလာဒ်များ: ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များအတွက် DSM-IV လယ်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေး။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1995; 38: 59-69 ။ [PubMed]
18 ။ Compton WM, Cottler LB, Dorsey KB, Spitznagel EL, Mager DE ။ CIDI-SAM ကိုနှင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းသုံးပြီး DSM-IV ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမမှန်၏အကဲဖြတ်နှိုငျးယှဉျ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1996; 41: 179-187 ။ [PubMed]
19 ။ Ashburner J ကို, Friston KJ ။ unified segment ။ NeuroImage ။ 2005; 26: 839-851 ။ [PubMed]
20 ။ Hayasaka S ကို, ဖန် KL, Liberzon ငါ Worsley KJ, Nichols TE ။ ကျပန်းလယ်ပြင်နှင့် permutation နည်းလမ်းများနှင့်အတူ Nonstationary စပျစ်သီးပြွတ်-size ကိုအခြ။ NeuroImage ။ 2004; 22: 676-687 ။ [PubMed]
21 ။ တစ်ဦး SPM Toolbox ကို အသုံးပြု. Brett M က, Anton J ကို, Valabregue R ကို, အကျိုးစီးပွားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း Poline ဂျေတိုင်းဒေသကြီး။ လူ့ဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်းအပေါ်အဋ္ဌအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံ; Sendai, ဂျပန်။ 2002 ။
22 ။ et al Tzourio-Mazoyer N ကို, Landeau B, Papathanassiou: D, Crivello က F, Etard အို Delcroix N ကို။ အဆိုပါ MNI MRI Single-ဘာသာရပ်သည်ဦးနှောက်တစ် macroscopic ခန္ဓာဗေဒကှကျကို အသုံးပြု. SPM အတွက် Active ၏အလိုအလျောက်ခန္ဓာဗေဒတံဆိပ်ကပ်ခြင်း။ Neuroimage ။ 2002; 15: 273-289 ။ [PubMed]
23 ။ Pfefferbaum တစ်ဦးက, Sullivan က EV, Mathalon DH, ဆေိုငျထုအတှငျး PK, Rosenbloom MJ, Lim က KO ။ abstinent နှင့်ပြန်ရောက်သွားတယ်အရက်သမားအတွက်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ကဦးနှောက် volumes ကိုအတွက် longitudinal အပြောင်းအလဲများကို။ အရက် Clin Exp Res ။ 1995; 19: 1177-1191 ။ [PubMed]
24 ။ Volkow ND, Chang က L ကို, et al ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Franceschi: D, Sedler M က။ စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက် dopamine ပို့ဆောင်ရေး၏ဆုံးရှုံးမှုအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence နှင့်အတူပြန်လည်သက်သာ။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 9414-9418 ။ [PubMed]
25 ။ Porrino LJ, လီယွန်ဃ Orbital နှင့် prefrontal cortex နဲ့ psychostimulant အလွဲသုံးစားမှု medial: တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်လေ့လာမှုများ။ Cereb Cortex ။ 2000; 10: 326-333 ။ [PubMed]
26 ။ Jentsch JD, Redmond DE, Jr က Elsworth JD, တေလာ JR, Youngren KD, Roth RH အ။ phencyclidine ၏ရေရှည်အုပ်ချုပ်မှုအပြီးမျောက်တွေကိုသိမြင်လိုငွေပြမှုနှင့် cortical dopamine ကမောက်ကမဖြစ်မှုတည်မြဲ။ သိပ္ပံ။ 1997; 277: 953-955 ။ [PubMed]
27 ။ Petri မိုင်, Bickel wk, Arnett အမ်ဘိန်းဖြူစွဲအတွက်အနာဂတ်အကျိုးဆက်များဖို့အချိန်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းနှင့်အာရုံမခံစားနိုင်သောတာရှည်။ စွဲလမ်း။ 1998; 93: 729-738 ။ [PubMed]
28 ။ S ကပေးသနား Contoreggi ကို C, လန်ဒန် ED ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများတွင်ချို့ယွင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသပါ။ Neuropsychologia ။ 2000; 38: 1180-1187 ။ [PubMed]
29 ။ Mazas, CA, ဖင်လန် PR စနစ်, Steinmetz je ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘက်လိုက်မှု, antisocial ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, စောစော-စတင်ခြင်းရက်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2000; 24: 1036-1040 ။ [PubMed]
30 ။ Bechara တစ်ဦးက, Dolan S က, Denburg N ကို, သမင်ဒရယ်တစ်ဦးက, Anderson က SW, နေသန် PE ။ အလုပ်မဖြစ်တဲ့ ventromedial prefrontal cortex ဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုငွေပြမှု, အရက်နှင့်လှုံ့ဆော်ချိုးဖောက်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ Neuropsychologia ။ 2001; 39: 376-389 ။ [PubMed]
31 ။ Petri မိုင်။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့် Impulse ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2001; 63: 29-38 ။ [PubMed]
32 ။ Jernigan TL, Gamst AC အ, Archibald SL, Fennema-Notestine ကို C, Mindt MR, Marcotte TD, et al ။ ဦးနှောက် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အပေါ်စိတ်ကြွဆေးမှီခိုနှင့် HIV ပိုးကူးစက်မှု၏ဆိုးကျိုးများ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1461-1472 ။ [PubMed]
33 ။ Jacobsen LK, Giedd ဖြစ်မှု, Gottschalk ကို C, Kosten TR, Krystal JH ။ ကိုကင်းမှီခိုနှင့်အတူလူနာအတွက် caudate နှင့် putamen ၏ quantitative shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 158: 486-489 ။ [PubMed]
34 ။ Matochik ဂျာ Eldreth DA, Cadet JL, Bolla KI ။ မိုးသည်းထန်စွာဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများသည်အတွက်ဦးနှောက်တစ်သျှူးဖွဲ့စည်းမှုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2005; 77: 23-30 ။ [PubMed]
35 ။ Fein, G, Landman B, Tran H ကို, McGillivray က S, ဖင်လန် P ကို, Barakos J ကို, et al ။ တစ်ဦး simulated လောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်ချို့ယွင်းသရုပ်ပြသူကိုရေရှည် abstinent အရက်သမားအတွက်ဦးနှောက်ကျုံ့။ Neuroimage ။ 2006; 32: 1465-1471 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
36 ။ Fushimi Y ကို, Miki Y ကို, Urayama S က, Okada T က, Mori N ကို, Hanakawa T က, et al ။ တစ်အရေအတွက်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု: 1 T နှင့်3T ကမှာလှည့်ဖျား-ပဲ့တင်သံ T1.5 မာန်တင်းပုံရိပ်တွေအပေါ်မီးခိုးရောင်ကိစ္စ-အဖြူကိစ္စဆနျ့ကငျြဘ။ EUR Radiol ။ 2007; 17: 2921-2925 ။ [PubMed]
37 ။ lu H ကို, Naga-Poetscher LM, Golay X ကို, လင်း: D, Pomper M က, ဗန် Zijl PC ကို။ 3.0 တက်စလာမှာအသုံးပြုမှုအတွက်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လက်တွေ့ဦးနှောက် MRI ပာ။ J ကို Magn ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging က။ 2005; 22: 13-22 ။ [PubMed]
38 ။ Lacerda AL, Keshavan က MS, et al Hardan AY, Yorbik အို Brambilla P ကို, Sassi RB ။ အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါအတွက် orbitofrontal cortex ၏ခန္ဓာဗေဒအကဲဖြတ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004; 55: 353-358 ။ [PubMed]